Ciidamada amniga oo Caawo xiray Idaacadda Shabeelle – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka dowladda Federaalka Soomaaliya aya caawo xiray idaacadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee Shabeelle iyo Sky FM ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa tagay xarunta idaacadda Shabeelle oo ku taalla Xaafadda Taleex ee magaalada Muqdisho, iyagoo amar ku siiyey howl-wadeennada idaacadaha Shabeelle iyo Sky Fm in ay idaacadahaasi xiranyihiin.
Waxaa hawada laga saaray FM-yada idaacadahaasi,waana markii labaad oo albaabada la isugu dhufto labadasi idaacadood, iyagoo muddo ku dhawaad sanad ah xirnaa kaddib markii ay ku xadgudbeen sharciga dalka u yaalla.
Ciidamada ammaanka ayaa soo xiray Axmed Cabdi Xasan oo ah wariyihii warka daayay iyo Maxamed Muuse Maxamuud oo ah agaasimaha idaacada Shabelle,ka dib markii ay idaacada baahisay war ka dhan ah ammaanka dalka.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha, Maxamed Yuusuf Cismaan,ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in idaacadaha la xiray ay baahiyeen wararka kooxd argagixisada ee UGUS oo ay dowladdu horey uga soo saartay amar ku aaddan inaan la baahin Karin wararka kooxdaasi oo lagu qal qalgalinayo amniga waddanka.